Ihe nnọchianya mmadụ - March ụwa
Mbido » Ụdị mmadụ
Site na IES Punta Larga nke Santa Cruz de Tenerife, ha na-ezitere anyị
Foto nke abụọ nke okirikiri nke nkuzi na Socio-egwuregwu animation, modulu ATL
Anyị na-ezitere gị vidiyo maka akara nke mmadụ ime ihe ike nke ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi nke etiti hiwere na Septemba 26 gara aga.
Studentsmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ El Casar
Studentsmụ akwụkwọ nke IES Campiña Alta na IES Juán García Valdemora
N'oge nke International Day of Nonviolence na mmalite nke 2nd World March, ụmụ akwụkwọ 200 Alumni nke IES Campiña Alta na IES Juán García Valdemora, na ndị okenye 50 nke El Casar mere ihe ngosi nke mmadụ nke enweghị nsogbu.
ISI MiraCamp, Vila-real
N'ime ntụgharị MiES, ha na-agwa anyị na:
Anyị akọwawapụtala isiokwu nke mkpọsa gị, "Akara ngosi nke udo na enweghị mmegide mmadụ".
Anyị na-atụle atụmatụ gị dị ka ihe na-atọ ụtọ, nke mere anyị ji ezitere gị ọrụ anyị na ụmụ akwụkwọ.
Ntụgharị Ntụgharị Antonio Machado, Nweta
Site na ntụgharị ntụgharị ntụgharị uche ntụgharị ntụgharị ntụgharị ntụgharị ntụgharị ntụgharị ntụgharị (ntụgharị ntụgharị ntụgharị) banyere ntụgharị ntụgharị uche ntụgharị (ntụgharị ntụgharị ntụgharị) ụwa ntụgharị (ntụgharị ntụgharị ntụgharị) ntụgharị ntụgharị (ntụgharị ntụgharị ntụgharị)), ntụgharị ntụgharị uche ntụgharị, ntụgharị ntụgharị uche (አይES) Antonio Machado zigara ndị otu ihe onyonyo nke otu ha siri guzobe akara ngosi nke Udo.
Site na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Rosales dị na Madrid, ha na-ezitere anyị akara ngosi udo nke mmadụ.
Ihe Ngosi nke Ndi Mmadu na Ego Udo
Emepụtara mmemme "HUMAN SYMBOLS AND SABANA DE LA PAZ" ya na ụmụakwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na praịmarị nke ụlọ akwụkwọ "Villa Maria Cano" n'obodo Mosquera Cundinamarca (Colombia).
Emere na mmemme ntụrụndụ na-eme ka ndị mmadụ mata banyere udo na enweghị ime ihe ike na ịkpọsa 2nd World March maka Peace na Nonviolence.
Institutionlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na Tamil Nadu
Institutionlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na Tamil Nadu (India)
30 nke August nke 2019, Akara nke Udo mezuru na Nkuzi Mmụta na Tamil Nadu (India).
Site na Gamo Diana School - Madrid
N'ụbọchị nke Udo na Ime Ihe Ike 2019, ana m etinye ihe nnọchianya anyị mere na January 30 gara aga n'etiti m.
ECIP Cardenal Herrera Oria
Site na CEIP Cardenal Herrera Oria nke Madrid, n'ụbọchị Peace na Non-ime ihe ike 2019, ha na-ezipụ ozi a mara mma
Ndị m hụrụ n'anya:
Nke mbụ, ekele maka ọrụ a mara mma.
Ụnyaahụ anyị mere ememe udo n'ụlọ akwụkwọ. Ọkwa ọ bụla mere agbụ nke otu agba nwere ozi udo na ịhụnanya. N'ime ogige ahụ, a na-ejikọta ụdọ niile ma anyị na-eke gburugburu na isiokwu bụ "Ka anyị na-esiwanye ike ka anyị na-enwekwu".
A gụrụ ozi nke udo, megide ụdị ụdị ọ bụla, anyị wee bụrụ abụ.
Anyị na-eziga gị foto na agbanyeghị ịhụnanya nke ụlọ akwụkwọ ahụ na anyị chọrọ ịgafe ụwa dum.
N'ebe ọzọ, nata ekele ekele.